Iran : Mpianatra tsy manaiky fanasarahana ny lahy sy ny vavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Marsa 2008 17:19 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Português, 简体中文, 繁體中文, Deutsch, 日本語, বাংলা, Shqip, Español, English
Mpianatra an-jatony tao amin'ny Shiraz University no nanohy ny fihetsiketsehana tsy mankasitraka ny fampisarahana ny lahy sy ny vavy tamin'ny atalata faha-4 marsa. Maniry ireo mpianatra mba hanafoanana ilay fanasarahina ny lahy sy ny vavy anaty lakilasy samihafy izay nanomboka tamin'ny volana febroary teo.
Nangataka ny mpianatra ny hialan'ny prezidan'ny anjerimanontolo ary koa ny mba hisian'ny fomba fiainana tsara kokoa amin'ny cafeteria sy trano fatoriana. Mba te hifidy malalaka koa ry zareo ny mpisolo tena azy. Tamin'ny 4 Martsa teo dia niditra tamin'ny andro fahavalo ny fihetsiketsehana ary mpitoraka blaogy maro no nanoratra momba izy io, raha tsy noraharahian'ny gazety ara-dalana tao an-toerana izy ity.
Indro misy oronantsaray momba ilay fihetsiketsehana, ahitana ny mpianatra mihira hoe “Ity ny hafatray farany, vonona hirotaka ny fihetsiketsehan'ny mpianatra”.
Ao amin'ny toraka blaogy mitondra ny anarana hoe “Mpianatra sosialistan'ny departmenta Bahonarn'i Shiraz”, dia vakiantsika ny hoe :
Mpianatra amananjatony no nihira hoe “Zonay tanteraka ny Filaminana sy Fandriampahalemana” (ny governemanta iraniana mantsy mampiasa hoe Zony tanteraka ny nokleary). Tsy toby miaramila ny anjerimanontolo.
Manampy ilay mpitoraka blaogy hoe nampanantena ny manampahefana tao amin'ny anjerimanontolo fa hikarakara ny fangatahana'ny mpianatra tamin'ny niantombohan'ny fihetsiketsehana. Fa kosa toa tsy nisy inona inona nitranga.
Hoy ilay mpitoraka blaogy hoe voafehy ny fahafahan'ny mpianatra tao amin'ny anjerimanontolo satria misy miaramila manery ilay fanavakavahana vehivavy sy tovovavy.
Mpitoraka blaogy hafa indray, “Mpianatra literatiora sosialista ao amin'ny Shiraz University”, tsy manaiky ny fanasarahana vavy sy lahy an-dakilasy ary antsoiny hoe heloka amin'ny olombelona izy ity. Ity mpitoraka blaogy ity manoratra fa nisy mpianatra voan'ny hetraketraka ary mampikorontana ny mpianatra ihany koa ny miaramila mitombo isa.
Manoratra i Ta Azadi 86 [Fa] fa mitohy ny fihetsiketsehana, ary koa mitombo ny isan'ny manam-pahefana. Hoy ilay mpitoraka bilaogy :
Mpianatra efa ho folo teo no nantsoina teny amin'ny tribonaly. Mpampianatra maromaro niaraka tamin'ny mpianatra. Basiji naniry hanakorontana ny fihetsiketsehana fa ny fanoheran'ny mpianatra no nandroaka azy.
AmirKabir Khabarnameh, gazety aterineto lehibe mpizara vaovao ho an'ny mpianatra, manoratra fa betsaka ny fianakavian'ny mpianatra no nangatahan'ny hery mpandamina hoe aza avela mandray anjara amin'ny fihetsiketsehana ny zanany.
Nosoratan'i Hamid Tehrani
Misy ho resahana mihitsy amin’ny “Journee internationale de la femme” + VM rampitso :).
07 Marsa 2008, 18:49